The Complete Guide To Travel Na France Site Train | Save A Train
Home > Train Travel France > The Complete Guide To Travel Na France Site Train
Oge Ọgụgụ: 11 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 01/04/2021)
France dịwo anya a mmasị na otu onye nke kasị ewu ewu na-eme njem nleta aga Europe. Nyere na ọ bụ kasị obodo dị n'ebe ọdịda anyanwụ Europe, ọ na-eme uche na-njem ụgbọ okporo ígwè. The French ọchịchị nyekwara ke elu-ọsọ edoghi (Large gold akara ọsọ TGV) na elu-ọsọ ụgbọ oloko (Great ụgbọ okporo ígwè TGV gold Speed ​​Train). E nwere ihe karịrị 1056 kilomita (1700 km) nke raara onwe ya nye elu-ọsọ edoghi nakwa dị ka puku kilomita nke isi na nta edoghi. Fọrọ nke nta na mba niile bụ inweta site na French ụzọ ụgbọ okporo ígwè. France si ụgbọ oloko na-oru oma, ngwa ngwa, na ga-ị ebe ị chọrọ ịga n'ime obodo nakwa ma ọ bụ ihe ọ bụla na agbata obi na obodo. Ọ bụrụ na ị na-a mbụ oge ije France, ụzọ kasị mma na-gburugburu iji ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ site ịkpachara anya njem atụmatụ. Otú ọ dị, na okporo ígwè netwọk nwere ike ịbụ otu obere anya, karịsịa mgbe ị na-adịghị ekwu okwu ma ọ bụ gụọ French. Iji nyere gị aka ịghọta na ụgbọ okporo ígwè na usoro ke France, anyị kere a zuru ndu njem ofụri France ụgbọ okporo ígwè.
Na a ndu, ị ga-ahụ ihe niile ị chọrọ ịma ike gị onwe onye njem plan. Anyị ga-enyekwa ihe ọmụma banyere dị iche iche ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na France na ụdị nke ụgbọ oloko. Anyị ga-enye gị uru Atụmatụ na ịzụ tiketi maka kasị ala price, ndiwọk mbe ụgbọ okporo ígwè usoro, uru nke okporo ígwè gafee, ma na-gburugburu France si Paris. Na-agụ The Complete Guide To Travel Na France Site Train na-achọpụta otú ime njem na France ụgbọ okporo ígwè.
Olee otú Iji Buy Train Tickets Na France
Ebe m nwere ike ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè m njem France?
E nwere ọtụtụ mfe ma adaba ụzọ ma ọ bụ weebụsaịtị maka ịzụ French gbaa ụgbọ okporo ígwè. Ha ndị pụtara mfe iji, ma ọtụtụ n'ime ha na ha onwe ha quirks na oddities na anyị kwesịrị tụọ.
Save a Train bụ a ụlọ ọrụ na-digitized na oké mgbanwe okporo ígwè Ịnye tiketi. Gaa na ha website, tụnyere ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ, họrọ ụgbọ okporo ígwè akara, na pịnye nke oche na ị chọrọ. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na gị kaadị ma ọ bụ ọbụna bitcoin. Ọ bụrụ na gị na ụgbọ okporo ígwè tiketi si price tụlee, n'elu ikpo okwu ga-ekwe ka ị maara na enyemaka gị gbanwere ya maka a ala price.
Wnne okụt na ukara website nke French Railways, ị ga-kasị eleghị anya na-ibugharị RailEurope.com, nke bụ ukara North American onye nke French Railways. Otú ọ dị, ị ga-bụghị mgbe niile chọta ndị dị ọnụ ala n'ego ụgbọ na Okporo ígwè Europe. Ya mere, should kwesịrị ị na-elebara anya mgbe niile na ọnụ ụzọ ụgbọ oloko dị ọnụ ala na Save A Train.
Na The Train Station
E nwere ụzọ abụọ ịzụta French gbaa ụgbọ okporo ígwè na ọdụ - si a tiketi window na na vending igwe. English-ọkà okwu nwere ike ịzụta ha nke ọ bụla, ma ọ bụrụ na gị na English bụ na ezi na ike na-ekwurịta okwu na onye na tiketi window ọma, na vending igwe bụ gị mma nzọ. Ọ dị mfe ka ịnyagharịa, na ị pụrụ ọbụna ịgbanwe ya asụsụ ntọala. Ịzụ tiketi si vending igwe na-achọ a Mgbawa & PIN kaadị.
Olee otú m ga na-anakọta m online tiketi?
E nwere ọtụtụ ụzọ nke obon gị tiketi:
Bulie na ọdụ. Na-anakọta gị tiketi na ọdụ, i nwere ike iji a ntinye akwụkwọ ozi nọmba ma ọ bụ kaadị (otu onye ị na-eji ịzụta tiketi).
Print-na-home tiketi. Mgbe ị na-anata electronic tiketi, i nwere ike na-ebipụta ha ma na-egosi ha na ụgbọ okporo ígwè na-eduzi ya na-achọpụtazi tiketi.
kọmputa tiketi. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-ebipụta gị tiketi, ị nwere ike ibudata ya na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Ị nwere ike dị na-egosi onye na-eduzi gị tiketi site na gị na ekwentị ma ọ bụ mbadamba na ihuenyo.
ezigara tiketi. Ụfọdụ ọrụ na-enye nhọrọ nke eziga gị tiketi via mgbe mail. Otú ọ dị, na bụ a nnọọ ngwa ngwa usoro, ya mere, bụghị a-atụ aro nhọrọ.
M Kwesịrị ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè tupu?
Ọ nwere ike na anya mara nke gbaa ụgbọ okporo ígwè nwere ike zụrụ mgbe ọ bụla na nke a ga-zụtara n'ọdịnihu n'ihi na e nwere ọtụtụ ụdị nke ụgbọ oloko na dị iche iche ụgbọ okporo ígwè ọrụ.
Regional / obodo ụgbọ oloko. Regional na obodo ụgbọ oloko jikọọ suburban na mpaghara ebe. RER na Transilien Jikọọ suburban Paris, mgbe Ter ụgbọ oloko (Train Regional Expres) na mpaghara ụgbọ oloko na jikọọ na mpaghara n'ógbè nlekọta ọrụ na nta. Ị na-adịghị ịzụta mpaghara na obodo gbaa ụgbọ okporo ígwè tupu, dị nnọọ ịzụta ha nri n'ihu ọpụpụ.
Intercite ụgbọ oloko (IC). An Intercites ụgbọ okporo ígwè bụ ụgbọ oloko awara awara nke na-adịghị njem na elu-ọsọ edoghi na ejikọ n'obodo nakwa dị ka mkpumkpu anya. Nwere ike ịzụta tiketi IC tupu ị nweta ego.
Akwa-agba ụgbọ oloko (TGV). TGV ụgbọ oloko na-kasị ụgbọ oloko na France, na tiketi maka ha dị ka zuo 90 ụbọchị tupu. The ahịa ha anọgide na-ebili dị ka ọpụpụ ụbọchị na-eru nso, ka akwụkwọ ha n'oge maka kasị ala price. A tiketi zụrụ 90 ụbọchị tupu ike eri € 30. Ma ọ bụrụ na ị zụta ha a ụbọchị ole na ole tupu ọpụpụ, ọnụahịa tiketi nwere ike ịdị elu dị ka € 100.
International ụgbọ oloko. Otu iwu na n'oge ntinye akwụkwọ emetụta mba ụgbọ oloko n'ihi na ndị a na-elu-ọsọ ụgbọ oloko.
Olee uru nke okporo ígwè ngafe tiketi?
E nwere ihe a dịgasị iche iche nke okporo ígwè ngafe tiketi ị nwere ike iji na njem ofụri France ụgbọ okporo ígwè. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwe ka ị njem n'ime France na ndị ọzọ na mba Europe, na mgbe ahụ, e nwere okporo ígwè gafee na-nanị maka njem n'ime France. N'adịghị ka mgbe nile gbaa ụgbọ okporo ígwè, okporo ígwè ngafe tiketi abịa na ụfọdụ uru:
mgbanwe. Na a okporo ígwè ngafe tiketi, ị ga-esi na-akparaghị ókè ụgbọ okporo ígwè njem. Dị nnọọ na-aga ebe ọ bụla ị na-amasị, pụọ okporo ígwè ngafe na ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ ma na-ọzọ na-ụgbọ oloko.
ego. Okporo ígwè na-aga a na-abịa na inclusions ego maka nkiri, na-eme ka ha ihe ndị magburu onwe nhọrọ maka mmefu ego njem. Ha nwere ike ịbụ a nnukwu ego-nchekwa, nke bụ isi ihe mere ndị mmadụ zuo okporo ígwè gafee. Ikpeazụ-nkeji gbaa ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịdị ọnụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akwụkwọ ha tupu.
mma. Ị adịghị mkpa ka nchegbu banyere ịzụ a tiketi oge ọ bụla ị na-achọ ime a ụgbọ okporo ígwè, ma ị ga-enwerịrị mgbanwe ebe ọ bụ na ị gaghị enwe ebe ọ bụla ụgbọ oloko ịchọrọ.
Nke okporo ígwè ngafe tiketi ga m zuo?
Mgbe ịzụta a okporo ígwè ngafe tiketi, ị nwere ike họrọ n'etiti France Country Pass na Multi-Country Pass (Eurail Global Pass).
The France Country Pass bụ gị mma nzọ ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ njem na France n'ihi na ọ na-enye na-akparaghị ókè njem na mba okporo ígwè netwọk (tinyere intercity, Ter, TGC, wdg). Ị nwere ike ịhọrọ ma 1 ka 8 ụbọchị nke njem n'ime a n'ọnwa nakwa dị ka ịhọrọ mbụ na nke abụọ na klas. A oche ndoputa a chọrọ na mgbakwunye na a okporo ígwè rue maka njem na elu-ọsọ ụgbọ oloko. Na nke a na ngafe, ị na-enweta ego dị iche iche ụgbọ ala, ferries, cruises, hotels, ngosi ihe mgbe ochie, na ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
The Eurail Global Pass bụ a mma nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-njem na mba ndị agbata obi. Nke a multi-mba ngafe na-enye na-akparaghị ókè njem ka 31 mba dị iche iche Europe (na nsonye France). Na Eurail gafee, e nweghị ịgba na ọnụ ọgụgụ nke ugboro i nwere ike enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè. họrọ ma 3, 5, ma ọ bụ 7 ụbọchị nke njem n'ime otu ọnwa ma ọ bụ 10-15 ụbọchị nke njem n'ime ọnwa abụọ. Cheta na-eme obi abụọ tupu ọpụpụ.
Kasị okporo ígwè gafee na-akwụkwọ dabeere na, na ị ga-mkpa dee ụbọchị gị ọpụpụ tupu njem mbụ nke ụbọchị ọ bụla. Seat abụọ maka elu-ọsọ ụgbọ oloko ga-eri gị n'etiti € 10 na € 20 kwa oche, mgbe mba aga abụọ mbio € 35 ka € 89 kwa oche (dabere na ebe).
AN Mkpa IHE: Okporo ígwè Pass bụ nanị ezi uru maka ego ma ọ bụrụ na ị na-azụ njem karịa 14 ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-eme njem maka ihe na-erughị isi na-ezo ụgbọ okporo ígwè dị ka ihe Save A Train bụ onyinye na-enye mma maka ego gị.
Marseilles ruo oge ụgbọ oloko nke Lyon
Paris ruo oge ụgbọ oloko Lyon
Lyon ka Avignon Ụgbọ oloko
Olee otú Iji Jiri Train Tickets Na France?
On mpaghara na obodo ụgbọ oloko, i nwere ike iji njem na a anụ ahụ tiketi. Gaa a nkwado igbe n'ihu gị ọpụpụ iji emere ebere ma ọ bụ "stampụ" gị tiketi. Ọ bụrụ na ị na-emere ebere ya n'ihu ọpụpụ, echere-eduzi ya aka ikpochapụ ya mgbe na ụgbọ okporo ígwè. E nweghị ndị na oche abụọ maka mpaghara na obodo ụgbọ oloko, otú dị nnọọ nọdụ n'ebe ọ bụla.
On elu-ọsọ ụgbọ oloko, e nwere a kpọmkwem oge e biri ebi na gị tiketi, na tiketi bụ nanị nti maka na kwuru kpọmkwem oge. Ọ dịghị mkpa iji emere ebere gị tiketi n'ihi na i nwere a oche ndoputa. Jide n'aka na ị na-ahụ nri ụgbọala na oche (nọmba e dere ma ọ bụ ndị e biri ebi na gị tiketi).
Paris na Rouen Ụgbọ oloko
Rouen na Paris Ụgbọ oloko
Paris na Calais Ụgbọ oloko
Rouen ka Calais Ụgbọ oloko
Inweta Around France Site Paris
Mgbe njem nleta na France, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-eme Paris ha amalite maka njem ụgbọ oloko n'ime mba. Mgbe malite na Paris, i nwere ike iru fọrọ nke nta ọ bụla na-aga n'ime obodo. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị isi ebe jere ozi site na Paris bụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Gare d'Austerlitz ma ọ bụ Austerlitz Train Station – Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse, Biarritz, Tours, na n'ebe ọdịda anyanwụ Spain.
Montparnase Train Station ma ọ bụ Gare Montparnasse – All TGVs na n'ebe ọdịda anyanwụ France (Rennes, Nantes, Brest, Brittany)
Gare du Nord – Northeast France, Valenciennes, obere, Calais; Brussels, Cologne, na Amsterdam (Thalys); London (Eurostar).
Gare de Lyon – South nke France. Montpellier, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Besançon, Marseille, Nice. Mulhouse na East nke France. Catalonia (Girona, Barcelona), Italy, na Switzerland (Geneva, Zurich).
Saint Lazare Railway Station ma ọ bụ Gare St. Lazare – Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg.
East Station – Nancy. Reims, Metz, Strasbourg, Luxembourg, na Germany.
La Rochelle ka Nantes Ụgbọ oloko
Toulouse ka La Rochelle Ụgbọ oloko
Bordeaux ka La Rochelle Ụgbọ oloko
Paris na La Rochelle Ụgbọ oloko
Best Atụmatụ N'ihi Travel Na France Site Train
Anyị na-enye gị na a na ndepụta nke oké Atụmatụ ga-eme ka gị na ụgbọ okporo ígwè eme njem na France ihe adaba na-atọ ụtọ.
Na-abata n'oge n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ike n'aka na-n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ọ dịkarịa ala 20 nkeji tupu ọpụpụ, ma ọ bụ ọbụna na mbụ ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si nnukwu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, dị ka Gare du Nord na Paris. N'ihi na a njem nleta na-adịghị asụ French, ọ dịghị ihe na njọ karịa bịarutere naanị nkeji ole na ole tupu ọpụpụ enweghị nwere nwetụrụ echiche nke ebe na-aga. Obatara n'oge ga-enye gị oge na-elele Mbula Board maka ebe ọmụma, mata nke n'elu ikpo okwu gị ụgbọ okporo ígwè na-ahapụ, ma chọta ebe ikpo okwu kwesịrị ekwesị.
Ahapụ akpa gị unattended. Ị pụrụ iji na-eje ije dị nso shop maka ụfọdụ snacks ma ọ bụ mmiri. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-eje ije gburugburu, anaghị ahapụ gị akpa unattended ọbụna nke a nke abụọ. Ma ọ bụghị ya, ị n'ihe ize ndụ na-enwe na akpa gị zuru site ahụmahụ ohi. Isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na France (Tinyere Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon, na Bụ Paris Austerlitz ojii) nwere ekpe-igbe akpa dị iche iche nha. Tupu ị banye ebe mkpuchi, na-atụ anya ka gị na akpa X-rayed. ozugbo onboard, ebe akpa gị n'ime anya gị kama na raara onwe ya nye ibu oghere.
Mkpọ nri. Njem na-ekwe ka ha nwee nri na onunu na ụgbọ oloko, nke dị ukwuu n'ihi na anya ụgbọ okporo ígwè agafe. Ụfọdụ ụgbọ oloko nwere a Cafe na osisi, na ọtụtụ n'ime ha nwere a Trolley cart nke na-abịa na gburugburu. dị mwute ikwu na, na Trolley ọ bụghị mgbe nile na-abịa, na Cafe nwere ike a ga-emechi. The nri na ọṅụṅụ na osisi na-ọzọ dị oké ọnụ. Iji zọpụta ego, abịa onwe gị a picnic na ọkacha mmasị gị nri n'ihu bụla njem. E nwere dị iche mma na-echekwa na ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ebe ị pụrụ ịzụta ihe oriri na ọṅụṅụ.
download a okporo ígwè planner ngwa na ekwentị gị. E nwere na a nso nke okporo ígwè planner ngwa ị nwere ike iwunye na iji mee ka gị na ụgbọ okporo ígwè aga ihe adaba. Isiokwu anyị nwere ihe nile Ama na ụgbọ okporo ígwè schedules maka European ụgbọ oloko, na ụfọdụ ngwa ọdịnala anaghị achọ njikọ Ịntanetị. Na a okporo ígwè planner ngwa, ị ga-ama ma ụgbọ oloko gị na-aga na-mbubreyo (na site na otú ogologo) ma ọ bụ na oge, nakwa dị ka nke n'elu ikpo okwu na ọ ga na-abata / wezuga. na isi obodo dị ka Paris, ọ dịghị onye “isi” ebe, na ọ dị mfe na-emegharị otu ebe ọzọ. Na na nri ngwa, ị ga-ijide n'aka na ị ga-apụ na ziri ezi ojii.
akpa. Mgbe ọ na-abịa akpa, ị pụrụ isi mee ka ihe dị ka i nwere ike ibu ebe ọ bụ na e nweghị ibu ókè. I nwere ike na-echekwa gị akpa efefe, n'azụ oche gị, ma ọ bụ na a akpa akwa na ala ụgbọ ala gị.
Mbụ na klas na nke abụọ-otu tiketi. Onweghi ihe di iche di iche na moto nke mbu na nke abuo. Otú ọ dị, ọ bụ jụụ na mbụ na klas, na oche na-a bit ibu. Nke abụọ-otu ụgbọala na-ahụ n'ụzọ zuru okè mfe. Ọ bara uru ịkọ na tiketi nke mbụ na-akwụ ụgwọ ihe dị ka 1.5x karịa ego nke klas nke abụọ.
Ị gaghị nkwụghachi ọnụ ala tiketi. Ikekwe naanị otu azụ azụ tiketi dị ọnụ ala bụ na enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ kwụghachi ha.
Self-ọrụ na ígwè ọrụ. Mgbe na-eji a onwe-na-eje ozi tiketi igwe, ị nwere ike họrọ asụsụ Bekee nhọrọ, ka e dịghị mkpa ka na-echegbu onwe ma ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu French.
Ebu a igwe. On obodo na mpaghara ụgbọ oloko, ị pụrụ a ígwè na ị n'efu. TGVs na Intercity Night (n'otu ntabi anya ụgbọ oloko) na a ole na ole ụzọ gasị ka i a bike obere ego (abụkarị banyere € 10). On ọzọ TGV ụgbọ oloko, ị ga-etinye gị na ịnyịnya ígwè na a zip na-elu-igwe kwụ otu ebe-akpa.
na-eme ka njikọ. Tinyere ndị njem, gị na njem pụrụ ịchọ gị-agbanwe ụgbọ oloko. Ịmafe ụgbọ oloko na-a ngwa na mfe, ka e dịghị mkpa ka na-echegbu onwe ma ọ bụrụ na ị na-enweghị oge zuru ezu n'etiti ụgbọ oloko. A ụgbọ okporo ígwè njikọ pụrụ ịgụnye na-eje ije na ndị ọzọ n'akụkụ nke n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ndị ọzọ na akụkụ nke ụgbọ okporo ígwè.
Mara ụgbọ okporo ígwè aha. Large obodo nwere otutu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, nke nwere ike ịmepụta aghara. Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara iburu aha ha, dee ha ala na a mpempe akwụkwọ, chekwaa ha na ekwentị gị, ma ọ bụ jiri a okporo ígwè planner ngwa.
Cheta na ụgbọ okporo ígwè na-etiwapụ. France mara maka ụgbọ okporo ígwè na-etiwapụ, na ha mgbe niile aka ọha tupu na-aga na otu. Ezie na ụfọdụ ụgbọ oloko ka ga na-agba ọsọ, etiwapụ bụ ihe na-aṅa ntị ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji zere isi chefuo ahụhụ.
Iji Mgbawa & PIN kaadị. Ịzụta a tiketi na ihe akpaghị aka tiketi miri, ị ga-mkpa a Mgbawa & PIN kaadị, N'ihi ya, hụ na ị maara na koodu PIN gị, ọ bụ ezie na anyị adịghị ike ikwu na ọ, ebe ọ bụ na ọ dị oke ọnụ.
Marseilles na Paris Ụgbọ oloko
Marseilles ka Clermont Ferrand Ụgbọ oloko
All isi obodo na France na-ejikọrọ na TGV – na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè netwọk na ụgbọ oloko na njem na gbapụrụ ọsọ nke fọrọ nke nta 200 mph. Na ndị a gbapụrụ ọsọ, mpaghara niile nke France dị nso gị.
Anyị haziri a ndu “Complete Guide To Travel Na France Site Train” na-enye gị a siri ike nghọta nke otú French tren usoro na-arụ ọrụ na-enyere gị ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere na-ewere a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụghị n'aka ihe na-eme ma ọ bụ ebe na-amalite. Ma unu bụ ndị na a backpacking njem, a njem azụmahịa, ma ọ bụ na a na ezinụlọ ezumike, anyị nwetara gị kpuchie, Save A Train bụ ebe ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “The Complete Guide To Travel Na France Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ogbe tgv TrainStation gbaa ụgbọ okporo ígwè Train Travel traintravelfrance travelfrance
Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel UK, Travel Europe